ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မိန်းကလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလွှမ်းမိုးပါသလား။ (2003) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
comments: Stats ကတော့ 2002 ထံမှဖြစ်ကြသည်။ ငါးထဲကလေးယောက်ညစ်ညမ်းကျွမ်းလောင်ခဲ့သော, ဤ၏သုံးပုံတစ်ပုံညစ်ညမ်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိခိုက်ခဲ့ကွောငျးယုံကြည်သည်။ အကြောင်း 50% စအိုလိင်ဆက်ဆံရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့ကြောင်းနှင့်အများစုကမကြိုက်ကြဘူး။ အလားတူစာရေးဆရာများယောက်ျားစအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ porn အားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေကြတယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေ့လာမှုအတွက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်ဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု (2004) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာများ။ 2003 Jan-Feb;13(1):39-43.
Rogala C1, Tydén T က.
အမျိုးသမီးငယ် (ဎ = 1,000), စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်တစ်မိသားစုစီမံကိန်းဆေးခန်းသွားရောက်ခြင်း, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ညစ်ညမ်းမြင်ဘူးလျှင်မေးခွန်းလွှာဟုလျှောက်ကြ၏။ ငါးထဲကလေးယောက်ညစ်ညမ်းကျွမ်းလောင်ခဲ့သော, ဤ၏သုံးပုံတစ်ပုံညစ်ညမ်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိခိုက်ခဲ့ကွောငျးယုံကြည်သည်။ 47% ဆယ်ကျော်သက် (51%) ကြားတွင်ထက်သိသိသာသာအဟောင်းတွေမိန်းမတကာတို့ထက်ပိုပြီးအဖြစ်များခဲ့သည့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ, (31%) ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသကဲ့သို့အများအပြား။ အများစုနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံကိုအဖြစ်စအိုလိင်ဆက်ဆံတန်ဖိုးထား။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း (40%) အနိမ့်ဖြစ်သကဲ့သို့စအိုလိင်ဆက်ဆံရှိခြင်းအခါ, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများပြန့်ပွားဘို့အကျိုးဆက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။